Iswiidhen oo fakereysa tillaabada ay ka qaadeyso go'aankii Uganda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Madaxweynaha Yoweri Museveni shaley waxuu qalinka ku duugey sharci mamnuucaya qaniisnimada: Carl Court/TT.
Iswiidhen oo fakereysa tillaabada ay ka qaadeyso go'aankii Uganda
La daabacay tisdag 25 februari 2014 kl 14.05
Kadib markii madaxweynaha Uganda qalinka ku duugay sharci danbi ka dhigaya in uu qof ahaado qaniis ayaa waxaa isi soo taraya dhaleeceynta waddamada reer galbeedka u jeedinayaan dowladda Uganda.
Dowladdo ay kamid yahiin Danmark iyo Norweyd ayaa ku dhawaaqey in ay ka joojinayaan taageerada dhaqaale ee ay siiyaan dalkas.
Laakiin wasiirka dhaqaalaha Iswiidhen ayaa imminka socdaal ku maraya dalka Uganda. Balse wasiiradda kaalmada dibadda ee Iswidhen Hillevi Engström ayaa sheegtey in dowladda Iswiidhen ay marka hore ka fiirsaneyso inta aysan go’aan ka qaadan Uganda.
- Go’aamada noocan ah waa in ay ku dhisnaadaan xaqiiq u kuurgalid iyo waddahadal u dhaca si sax ah ayey tiri.
Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa asbuucaan gudahiisa saxiixey sharci cusub oo xabsi daa’in ku xukumaya ruuxa lagu qabto dhowr goor fal qaniisnimo ah, sidoo kale dadka dalkaas waajib uga dhigaya in ay booliiska ku wargeliyaan haddi ay arkaan ruux qaaniis ah.
Sharcigan cusub oo ay dhaleeceyeen waddamo badan sida Norwey iyo Danmark oo ah waddamo siiyo taageero dhaqaale dalka Uganda, kuwwaas oo ku dhawaaqey markii madaxweynaha Uganda qalinka ku duugey sharcigaan in ay taageerada ka goosanayaan Unganda. Lakiin wasiirada taageerada caalamiga ah ee Iswiidhen Hillevi Ensgström ayaa dooneynin heerkaa in ay arrinta gaarsiiso.
- Waxaan aad u xiiseynayaa ka taxadarida dadka Uganda iyo sidaan u taageeri laheyn kuwa cadiban iyo kuwa aadka saboolka u ah. Waxaan doonayaa in aan hubsano sida ugu wanaagsan oo aan arrintan u sameyn karno. Sidaa daraadeed ayaan dooneynin in aan gaaro go’aan degdeg ah. waa dhaci kartaa guud ahaan taagerada aan siino dowladdas ama qayb kamid ah in aan ka joojino. Balse taas dib ayaan ka soo sheegi doonaa markaan ka baaran degno oo aan la hadalno dhaq dhaqaaqyada HBT_ga ee ay ku mideysan yahiin dadyowga qaniisiinta ah ee ka howl-gala dalka Uganda.
Taageerada dhaqaale ee Iswiidhen siiso Uganda
Iswiidhen ayaa dowladda Uganda siisey taageero dhaqaale oo dhan 220 miyan sannadkii hore. Qayb kamid ah taageradas dhaqaale ayaa la filayaa in go’aan laga gaaro bilowga gugaan, sida ay sheegtey Hillevi Engström. Waxeyse sheegtey in ay dhaci karto in Iswiidhen ka bixiyo falcelin degdeg ah sida dowladdaha Danmark iyo Norwey, balse ma aysan sheegin nooca falcelintas noqon karto.
- Xogaa ayaan ka aqristey waxey ka yiraahdeen arrintan ururada ku sugan Uganda. Waxaa muuqata in laga bixinayo argatiyo iska soo hojeeda arrintan. Ma doonayo in ruuxyada HBT-ga ah laga dhigto marmarsiiyo oo ay xabsi ku muteystaan qaniisnimadooda, islamarkaan marlabaad la kulmaan cinqaab kale oo ah taageerada dhaqaale oo laga joojiyo dadka Uganda. Waxaa nalooga baahan yahay in go'aankeena mid arimahaas ku dheelab tiran yahiin, ayey tiri wasiiradda kaalmada caalemiga Hillive Engtröm oo SR International u warameysey iyada oo ku sugan dalka jamuurida demokratiga ah ee Kongo.